“ဗယ်လန်တီနာ” နှင်းဆီဝိုင် ~ White Angel
5:50 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 11 comments
စာဖတ်သူများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးချင်သည့် ဝိုင် ကတော့ ဆိုက်ပရပစ်နိုင်ငံလုပ် “ဗယ်လန်တီနာ” နှင်းဆီဝိုင်(Valentina Rose Wine)တဲ့....
ချိုမြမြ ရှတတ အရသာရှိသော “ဗယ်လန်တီနာ” နှင်းဆီဝိုင် လေးရဲ့အကြောင်းကို မပြောခင် “ဝိုင်”(Wine) ကို အကြမ်းအားဖြင့် ......
စာဖတ်သူများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးချင်သည့် ဝိုင် ကတော့ ဆိုက်ပရပ်စ် နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် Medium Sweet Wine အမျိုးအစားဖြစ်သော“ဗန်လန်တီနာ နှင်းဆီဝိုင်” (Valentina Rose Wine) ဖြစ်သည်။ “ဗယ်လန်တီနာ” နှင်းဆီဝိုင်ချိုချိုကို “ကာဗနက် ဆဗန်ငေါ” (Cabernet Sauvignon) ၊ မာတာရို (Mataro) စပျစ်သီးတို့မှ ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းစပျစ်သီးများကို “မယ်ဆိုယိ” (Mesoyi) ရွာတွင်စိုက်ပျိုးပြီး “ဖီကာဒို့စ်” (Fikardos)ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည်။ သီးစုံရနံ့ သင်းပျံ့ပြီး ပန်းဆီရောင်ရှိသော “ဗယ်လန်တီနာ”နှင်းဆီဝိုင်ကို ပူပြင်းသော နွေရာသီအချိန်တွင် ဒေသခံများက Fashion တရပ်အနေဖြင့် ညစာစားပွဲများတွင် သောက်သုံးလေ့ရှိသည်။
“ဗယ်လန်တီနာ နှင်းဆီဝိုင်” ကို ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ၏ အမည်ဖြစ်သော “ဖီကာဒို့စ်” (Fikardos)သည် ပိုင်ရှင်၏ အမည် ဖြစ်ပြီး၊ ဝိုင်၏ အမည်ဖြစ်သော “ဗယ်လန်တီနာ” (Valentina) သည် ပိုင်ရှင်၏ သမီး အမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် Valentina Rose Wine ကို “Romantic Summer Wine” ဟု တင်စားခေါ်လေ့ရှိကြောင်း ဗဟုသုတ အနေဖြင့် ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
ဆိုက်ပရပ်ဝိုင်တွေ ကောင်းမှန်းသိပေမယ့် ဘကျောက်တော့ ဥပုသ်ဆောင်ဝင်နေတယ်
လာသောက်မယ် အမရေ.. :))
အင်း ၀ိုင်အမျိုးအစားတွေ အကြောင်းတော့
တော်တော်နားလည်သွားတယ် ၀ိုင်မှာသူ့ အစား
အစာနဲ့တွဲဖက်သောက်သုံးရတာလေးကို
တော့ သဘောကျမိတယ် . . . ကုမ္ပဏီအမည်
နဲ့ဝိုင်နာမည် တွေပေးပုံကတော့ Romantic
ဆန်တယ် မာစီဒီး ကားနာမည် ရာဇ၀င်လိုဘဲဗျာ. . . :)
သောက်ချင်တယ် အားလုံးကို တဂွပ်ဂွပ်နဲ့ကိုသောက်ချင်
း) ဂလုဂလု ပဲ ရှင်းပြတာလေးဖတ် ပုလင်းမြင် ဂလု
အိုးအို ကိုကိုကျောက်လိုပဲ ဥပုတ်ဆောင်ဝင်နေတော့မှ
သိချင်နေတာ ၀ိုင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး...
ဗဟုသုတ ရသွားလို့ ကျေးဇူး အစ်မ...
သူငယ်ချင်းရေ... X-mas နီးပြီနော်။ ၀ိုင်အကြောင်းတွေ ပြောလို့ လာငမ်းသွားတယ်။
အပေါ်က အဖွဲ့တွေကတော့ မသောက်ရပဲ ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး သွားရည်ကျနေကြပြီ။
ကိုဏီလင်းနဲ့ ကိုတူး အဆိုးဆုံးဖြစ်မယ်။း)
လင့်ချိတ်ဖို့ ခွင့်လာတောင်းတာ.. လာတုန်းကတော့ အကောင်းပါ... မူးပြီးပြန်သွားတယ်..ဗလင်တီနာ နှင်းဆီဝိုင်တဲ့လား.. နံမည်ကြားရတာကို ရင်ခုန်စရာ ..
အယ် သောက်ချင်တယ် ဂျီးတော်ရေ.. ပြန်လာရင် ဦးလေးအတွက် အကုန်သာ မ လာခဲ့နော် ဟီးဟီး။
(% Vol)နည်းလေ အချိုရေနဲ့ တူလေဘဲနော်..အရသာက မူးလဲမမူးဘူး ..တခါဘဲ သောက်ဖူးတာကို ဖြီးကြည့်တာ မမရ..
မမပုံလေးတွေကလဲ လှ အရက်လေးတွေကလဲ မိုက်တယ်ဗျို့..။
၀ိုင်တွေသောက်ချင်စရာလေးတွေနော်... နတ်သမီးရေ.. အမြည်းလေးပို့ပေးလိုက်...